Siyaasadda Khaaska ah ee FXCC | Sida aan u isticmaalno macluumaadka aan soo ururin karno
Home / Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Siyaasadda Khaaska ah ee FXCC
2. XAFIISKA SIYAASADEED
3. MAGAALADA MACLUUMAADKA SHARCIYADA
4. KALA DUWAN MACLUUMAADKA MACLUUMAADKAAGA
1. Waxqabadka heshiiska
2. U hoggaansanaanta waajibaadka sharciga ah
3. Ujeedada ilaalinta danaha sharciga ah
4. Hadafyada ganacsi ee gudaha iyo kaydinta rikoodhada
5. Ogeysiis sharci ah
6. Ujeedooyinka suuqyada
7. Si aad noogu caawiso hagaajinta alaabada iyo adeegyadeena
5. WAXYAABAHA MACLUUMAADKAAGA
6. KALA-QAADAYSAA DHIBAATOOYINKA
7. SIDA LAGU QAADO WARBIXIN QOF AH
8. XUQUUQDAADA KU SAABSAN MACLUUMAADKA QOFKA
9. LOO BAAHAN YIHIIN CINWAAN
10. WAQTIGA WAQTIGA LOOGU TALAGALAY
11. SIDA AAD U QAATO MACLUUMAADKAAGA
12. NIDAAMKA COOKIE
Central Clearing Ltd (bacdamaa "Shirkadda" ama "ann" ama "FXCC" ama "annaga"). Nidaamkan Qarsoodiga ahi wuxuu sharxayaa sida FXCC ay u ururiso adeegsiga iyo u maamulaan macluumaadka shakhsiga macaamiisha firfircoon iyo macaamiisha suurtagal ah. FXCC waxaa ka go'an ilaalinta qarsoodigaaga. Marka la furo xisaab ganacsi oo leh FXCC macmiilku wuxuu bixiyaa ogolaansho ah ururinta, farsamaynta, kaydinta iyo isticmaalka macluumaadka shakhsi ahaaneed ee FXCC sida lagu faahfaahiyay hoos.
Waa shuruucda shirkadda lagu ixtiraamo qarsoodiga macluumaadka iyo asturnaanta shaqsiyaadka.
Siyaasaddani waxay ujeedadeedu tahay inay ku siiso macluumaad ku saabsan sida aan u ururino oo aan wax uga qabano macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, oo ay ku jiraan wixii macluumaad ah ee aad ku bixin karto boggayaga internetka marka aad saxiixdid boggayaga internetka.
Waxaa muhiim ah in aad akhrido Nidaamkan Qarsoodiga ah ee la socda ogeysiisyo kale oo qarsoodi ah ama ogeysiis shaqo oo caddaalad ah oo aan ku siin karno waqtiyo gaar ah markaan ururineyno ama sameyneyno macluumaadka shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan si aad si buuxda u ogaatid sida iyo sababta aan u isticmaaleyno xogtaada . Nidaamkani wuxuu ku darsaday siyaasadaha kale mana aha mid looga danleeyahay in la tirtiro.
FXCC waxaan fahamsanahay muhiimada ilaalinta qarsoodiga Macluumaadka shakhsiyeed ee Macmiilka waxaana lagu go'aamiyey sidii loo hubin lahaa ammaanka wixii macluumaad ah oo ay bixiyaan macaamiisheena iyada oo loo marayo boggaan.
FXCC Qoraalka Qodobka Qodobka Qarsoodiga ah ayaa dib loo eegayaa waqti ka waqti si loo tixgeliyo shuruucda iyo tiknoolajiyada cusub, isbedelka hawlgalladeenna iyo dhaqdhaqaaqyadeena iyo si loo hubiyo in ay ku habboon tahay bii'ada badaleysa Macluumaad kasta oo aan hayno waxaa lagu maamuli doonaa Qoraalka Siyaasadeed ee ugu Weyn ee ugu Weyn. Siyaasadda Khaaska ah ee dib loo cusbooneysiiyey ayaa lagu soo rogi doonaa website-ka FXCC. Sidaa daraadeed, macaamiishu waxay ku heshiiyeen in ay aqbalaan soo-dirista siyaasad Qarsoodin ah oo kumbuyuutar ah oo ku salaysan shabakada internetka sida ogeysiiska dhabta ah ee FXCC macaamiisheeda. Haddii mid ka mid ah isbeddellada la sameeyey ay muhiim u yihiin markaas waxaan kuugu soo wargalineynaa email ahaan ama habka ogaysiiska ee bogga guriga. Khilaaf kasta oo ka dhan ah Siyaasadda Khaaska ah ee FXCC wuxuu ku xiran yahay ogeysiiskan iyo Heshiiska Macmiilka. FXCC waxay ku dhiirrigelisaa macaamiisheeda in ay si joogto ah dib u eegaan Siyaasaddaan Khaaska ah si ay marwalba uga warqabaan macluumaadka FXCC ururisa, sida ay u adeegsato iyo cidda ay u sheegi karto, iyada oo la raacayo qodobada Siyaasaddan.
Si ay u siiyaan macaamiisheena si hufan oo sax ah, markaad codsato inaad iska diiwaangeliso si aad u isticmaasho hal ama in ka badan oo ka mid ah adeegyadeena waxaan ku weydiin doonaa macluumaad shakhsiyeed. FXCC waxay haysaa xaqa iyo waajibaadka ayadoo loo eegayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga, si loo hubiyo saxsanaanta xogta lagu hayo xogta macluumaadka iyadoo marmar ku weydiineysa xogta la cusbooneysiiyey ama xaqiijinta saxsanaanta ee la sheegay.
Nooca macluumaadka shakhsiga ah ee aan soo ururin karno waxaa ka mid ah (laakiin aan ku xaddidneyn):
Magaca buuxa ee macaamiisha.
Cinwaanada guriga iyo shaqada.
Lambarada telefoonka guriga iyo shaqada.
Moobaylka / Telefoonka.
Lambarka baasaboorka / ama lambarka aqoonsiga.
Xukuumaddu waxay soo saartay aqoonsi sawir leh saxiix.
Macluumaadka ku saabsan xaaladda shaqo iyo dakhliga
Macluumaadka ku saabsan khibradaha ganacsiga hore iyo dulqaadashada halista.
Macluumaadka ku saabsan waxbarashada iyo xirfadda
Canshuurta Degaanka iyo Lambarka Aqoonsiga Canshuurta.
Xogta Dhaqaalaha waxaa ku jira [akoonka bangiga iyo faahfaahinta kaarka bixinta]
Macluumaadka Xawaaladda waxaa ka mid ah [faahfaahinta ku saabsan lacag-bixinada iyo adiguba].
Farsamada farsamada waxaa ka mid ah [Protokollka internetka (IP) cinwaankaaga, macluumaadkaaga kugubka, nooca browserka iyo nooca, goobta saacadaha goobta iyo goobta, noocyada faakiyeyska browser iyo noocyada, nidaamka hawlgalka iyo hirgelinta tiknoolajiyada kale ee aad isticmaasho si aad u gasho boggan ].
Xogta Faahfaahinta waxaa ku jira [magacaaga iyo lambarka sirta ah, iibsashada ama amarada aad sameysay, danahaaga, doorbidka, jawaab celinta iyo jawaabaha sahanka].
Isticmaalka Macluumaadka waxaa ka mid ah [macluumaadka ku saabsan sida aad u isticmaashid boggayaga, badeecooyinka iyo adeegyada].
Xogta Suuqgeynta iyo Isgaadhsiinta waxaa ka mid ah [waxa aad doorbidayso helitaanka suuq-geynta suuq-geynta iyo naadiyada saddexaad iyo doorbidkaaga is-gaarsiinta].
Waxaan sidoo kale ururinnaa, isticmaalnaa oo wadaagnaa macluumaadka la ururiyey sida xogta tirakoobka ama tirada dadweynaha ujeeddo kasta. Xogta la soo ururiyey waxaa laga yaabaa in laga soo qaado xogtaada shakhsiyeed laakiin aan loo tixgelineynin xogta shakhsi ahaaneed ee sharciga iyada oo xogtan aysan si toos ah ama si dadban u muujinayn aqoonsigaaga. Tusaale ahaan, waxaan ku dari karnaa macluumaadkaaga Isticmaalka si loo xisaabiyo boqolleyda dadka isticmaalaya isticmaalka bogga gaarka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aan isku darno ama ku xirno xogta la ururiyey macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si toos ah ama si aan toos ahayn kuu aqoonsan karo, waxaan ula dhaqmeynaa xogta la isku daray sida macluumaadka shakhsiyeed kaas oo loo isticmaali doono si waafaqsan ogeysiiskaas gaarka ah.
Kuma soo ururineyno Qaybaha Gaarka ah ee Xogta Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan (tan waxaa ku jira faahfaahin ku saabsan jinsiyadaada ama jinsiyadaaga, caqiidada diineed ama fikradaha falsafada, nolosha jinsiga, hanuuninta galmada, fikradaha siyaasadeed, xubinimada ururada shaqaalaha, macluumaadka ku saabsan caafimaadkaaga iyo xogta hidetada iyo xogta joometeriga) .
Waxaan sidoo kale soo ururin karnaa macluumaad gaar ah oo ku saabsan isticmaalka adeegyadeena. Tani waxaa ku jiri kara macluumaadka adiga iyo / ama shirkaddaada lagu aqoonsan karo sida wakhtiyada aad gasho, mugga isticmaalka adeegyada, noocyada macluumaadka, nidaamyada iyo warbixinnada aad kuhoreeysid, meelaha aad ka gasho, muddada kulannada iyo xogta kale ee la midka ah. Macluumaadka la uruuriyey waxaa sidoo kale laga yaabaa in si sharci ah looga helo qaybaha sadexaad, sida hay'adaha dawlada, shirkadaha kuugu soo bandhigay FXCC, shirkadaha sameeynta kartida, iyo sidoo kale ilaha guud ee la heli karo ee aan si sharci ah looma oggola in loola socodsiiyo.
Isgaarsiinta elektarooniggaaga iyo / ama telefoonkaaga annaga ayaa la duubay, waana hantida kaliya ee FXCC waxayna keeneysaa caddaynta isgaadhsiin noo dhexeeya.
Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad bixiso mid ama dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee loo baahan yahay. Hase yeeshee, macluumaadka maqan waxaa laga yaabaa in ay keenaan inaanu awoodin inaan furno ama hayno xisaabtaada iyo / ama inaan ku siino adeegyadayada
Waxaanu soo aruurineynaa habka loo maamulo macluumaadka noo ogolaanaya inaan fulino waajibaadkayaga qandaraaska adiga oo aan u hogaansamno waajibaadkayaga sharci.
Hoos waxaa ka mid ah ujeedooyinka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed lagu shaqeynayo:
Waxaanu ka shaqeyneynaa macluumaadkaaga si aan kuu siino adeegyadayada iyo alaabooyinkeena, iyo inaan awoodno inaan dhameystirno nidaamkayaga aqbalidda si aan u galno xiriir heshiis qandaraas leh macaamiisheena. Si aan u dhamaystirno macmiilkayaga waa inaanu hubinnaa aqoonsigaaga, u gutno macaamiisha marka loo eego waajibaadka sharciyeynta, waxaana u baahanahay inaan isticmaalno faahfaahinta la soo helay si ay si wax ku ool ah u maamulaan xisaabtaada ganacsigaaga FXCC.
Qaar ka mid ah waajibaadka sharciga ah waxaa lagu soo rogaa shuruucda la xidhiidha ee aan maadada, iyo sidoo kale shuruudaha sharciga ah, sida sharciyada dhaqdhaqaaqa lacagta la dhaqay, sharciyada adeegyada dhaqaalaha, shuruucda shirkadaha, sharciyada gaarka ah iyo sharciyada cashuurta. Waxaa intaa dheer, waxaa jira hay'ado kormeer ah oo kala duwan kuwaas oo shuruucda iyo qawaaniintu noo khuseeyaan, taas oo soo saartey waxqabadyo shaqsiyadeed oo lagama maarmaanka u ah jeegaga kaararka deynta, ka bixinta lacag bixinta, xaqiijinta aqoonsiga iyo u hoggaansanaanta amarada maxkamada.
FXCC waxay soo saartaa xogta shakhsi ahaaneed si loo ilaaliyo danaha sharciga ah ee naga dhaxaysa ama nalaka saddexaad, halkaasoo danta sharciga ah ay tahay marka aanu haysano ganacsi ama sabab ganacsi oo aad u isticmaasho macluumaadkaaga. Si kastaba ha noqotee, waa in aanad adeecin adiga iyo waxa kuu fiican. Tusaalooyinka hawlaha noocaas ah waxaa ka mid ah:
Bilaabidda dacwadaha maxkamadda iyo diyaarinta difaacidda hababka dacwadaha;
macnaheeda iyo nidaamyada aan qaadno si aan u siino shirkadda IT-ga iyo nidaamka nabadgelyada, ka hortagga dembiyada suurtagalka ah, amniga hantida, koontaroolada qaraarka iyo tallaabooyinka ka hortagga xadgudubka;
tallaabooyin lagu maamulayo ganacsiga iyo sii horumarinta alaabooyinka iyo adeegyada;
Waxa laga yaabaa in loo baahdo in la hirgeliyo xogtaada shakhsi ahaaneed ee ganacsiga gudaha iyo diiwaanada diiwaangelinta, taas oo ah danta sharci ahaaneed oo loo baahan yahay si loo hoggaansamo waajibaadka sharciga ah. Waxaan sidoo kale diiwaangelin doonaa diiwaannada si loo hubiyo in aad u hoggaansamayso waajibaadkaaga qandaraaska adiga oo raacaya heshiiska lagu maamulayo xidhiidhkayaga aad la leedahay.
Marmarka qaarkood, sharcigu wuxuu inooga baahan yahay inaanu kugula talinno isbeddelada qaarkood ee alaabta iyo / ama adeegyada ama sharciyada. Waxaa laga yaabaa inaan u baahanno inaan ku ogeysiinno isbeddelada la xidhiidha badeecadeenna iyo adeegyadeena, markaa waxaan ku khasbanaan doonnaa inaanu fulino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si aan kuu soo dirno ogeysiisyada sharciga ah. Waxaad sii wadi doontaa inaad hesho macluumaadkan xitaa haddii aad doorato inaadan ka helin macluumaadka suuq-geynta si toos ah.
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkaaga ujeedooyinka cilmi baarista iyo falanqaynta, iyo taariikhdaada ganacsiga si aad u gudbiso falanqeyn kasta, warbixinno, ololeyaal laga yaabo in ay kuugu soo gudbiyaan cinwaanka emailkaaga. Fadlan ogow inaad marwalba xaq u leedahay inaad bedesho ikhtiyaarkaaga haddii aanad rabin inaad hesho wargalin noocaas ah mar dambe.
Haddii aadan rabin in aan isticmaalno macluumaadkaaga shakhsiyeed sidan, fadlan u soo dir email u dir support@fxcc.com waydiin inaan la xiriirin ujeedooyin kasta oo suuq-geyn ah. Haddii aad tahay qadka taleefanka ah, waxaad gali kartaa adigu Qalabka ganacsiga ee ganacsadaha Hub iyo inaad beddesho doorashooyinkaaga ogeysiinta wakhti kasta.
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aad adigu siisay si aad u hubiso heerarka ugu sarreeya marka la bixinayo alaabada iyo adeegyadeena.
Ujeedada ugu weyn ee aan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waa inaan awood u leenahay inaan fahamno ujeedooyinkaaga dhaqaale iyo inaad hubiso in adeegyada ku habboon ay ku haboon yihiin profile-kaaga. Dheeraad ah, macluumaadkan wuxuu caawinayaa FXCC si loo bixiyo adeegyo tayo leh. Inkastoo aan kuu soo diri karno suuq suuq ah (oo ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidneyn SMS ama email-ka isgaarsiinta si aad u aragto, wicitaanada margin, ama macluumaad kale) mararka qaar oo aan u maleyneyno inay adiga faa'iido kuu tahay, waxaan ognahay baahida loo qabo ixtiraamka asturnaantaada. Haddii aan lagugu wargelin si kale, macluumaadka shakhsiga ah ee aanu hayno waxaa loo isticmaalaa sameynta iyo maareynta koontadaaga, dib u eegida baahidaada joogtada ah, kor u qaadida adeegga macaamiisha iyo alaabooyinka iyo inaad siiso macluumaad joogto ah ama fursado aan rumaysanno inay kugu habboon tahay.
FXCC ma sheegi doonto macluumaadkaaga shakhsiyeed iyadoon oggolaansho hore lagugu siinin, hase yeeshee, hadba ku xiran badeecada ama adeega khuseeya iyo xaddidaadyada xadidan ee macluumaadka xasaasiga ah, tani macnaheedu waa in macluumaadka shakhsi ahaaneed loo sheegi karo:
Bixiyeyaasha adeegga iyo la taliyeyaasha takhasuska leh ee FXCC kuwaas oo lagu heshiiyey in ay na siiyaan maamul, maaliyadeed, caymis, cilmi baaris ama adeegyo kale.
Bixinta shakhsiyaadka ama la-hawlgalayaal kuwaas oo aan leenahay xiriir is-kaashi (midkastaa laga yaabo inuu ku dhex jiro ama ka baxsan yahay Dhaqaalaha Yurub)
Bixiyeyaasha amaahda, maxkamadaha, maxkamadaha iyo hay'adaha sharci-dejinta sida ku habboon ama oggolaaday sharciga
Warbixinta amaahda ama hay'adaha tixraaca, bixiyeyaasha adeegga xaqiijinta saddexaad, ka hortaga khayaanada, ujeedooyinka lacagta la dhaqay, aqoonsiga ama jeegga caddaynta macmiilka
Qof kasta oo idman ee shakhsi ahaan, sida ku cad shakhsi ahaan ama heshiiska
Shirkadda saamileyda ah ama shirkad kale oo isku koox ah.
Haddii shuruudahaas loo baahdo in lagu sameeyo sharciga ama hay'ad sharci dejin ah, waxaa loo samayn doonaa si FXCC u hoggaansamaan waajibaadyada sharciga ah, iskaga difaacaan khiyaanada khatarta ah, iyo in ay ilaaliyaan heshiisyada bixiyaha adeegga. Haddii shuruudahaas loo baahdo waxaa loo baahan yahay in lagu sameeyo 'baahida-loo-yaqaan', haddii aan si kale u sheegin hay'adda maamulka. Guud ahaan, waxaan u baahannahay ururadan aan hoos imaanaynin FXCC ee haya ama helaya macluumaadka shakhsiyadeed sida bixiyeyaasha adeegga ee FXCC waxay qirayaan qarsoodiga macluumaadkaan, in ay ixtiraamaan xuquuqda qof ahaaneed ee qarsoodiga ah iyo u hoggaansamaan Mabaadi'da Ilaalinta Macluumaadka iyo nidaamkan.
Xaaladaha qaarkood, waxaan u gudbin karnaa macluumaadka dhinacyada saddexaad haddii sharci ahaan loo baahan yahay in la qabto ama haddii loo oggolaado sharciyadayada qaanuuniga ah ama sharci ahaan ama haddii aan helnay ogolaanshahaaga.
Waxa kale oo laga yaabaa in aan shaaca ka qaadno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee dhinacyada saddexaad haddii aan ku jirno waajibaad ah in la wadaago ama la wadaago macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si aad u hoggaanto waajibaad sharciyeed, ama si loo hirgeliyo ama loo adeegsado Shuruudaha Shuruudaha iyo Shuruudaha.
Adigoo soo gudbinaya macluumaadkaaga, waxaad ogolaatay isticmaalka FXCC ee macluumaadkaas, sida ku cad qorshahan. Adiga oo helaya oo isticmaalaya tan waxaad qiraysaa inaad akhrido, la fahmay oo aad ku raacdey siyaasadda asturnaanta. Waxaanu xaq u leenahay inaan bedelno siyaasadeena asturnaanta marwalba marba si aan u cusbooneysiino boggan. Fadlan dib u eeg siyaasadeena inta badan ee suurtogalka ah - isticmaalkaada sii socota ee Site wuxuu cadeynayaa in aad ogolaato wixii isbedel ah ee noocaas ah.
Boggaan waxaa laga yaabaa, mararka qaarkood, waxaa ku jira xiriiro iyo ka soo socota bogagga shabakadaha ee nala wadaaga iyo asxaabteena. Haddii aad raacdo xiriirka mid ka mid ah boggaan internetka, fadlan ogow in bogaggani ay yeelan karaan siyaasadahooda gaarka ah iyo inaanan aqbalin masuuliyad ama masuuliyad siyaasadeed. Fadlan hubi sharciyadan ka hor intaanad gudbin xogta shakhsi ahaaneed ee bogagga internetka.
Waxaad dib ula noqon kartaa ogolaanshahaaga wakhti kasta, hase yeeshee, wax kasta oo farsameynaya xogta shakhsiyeed ka hor inta aan la helin ka noqoshadaada laguma saari doono.
FXCC waxay sii wadi doontaa xogtaada shakhsiyeed illaa inta aan ku hayno xiriir ganacsi oo adiga kugu habboon.
Sharci ahaan waxaa laga rabaa inaan ka jawaabno codsiyada xogta shakhsiyadeed ee 30, ilaa iyo nooca codsigu u baahan yahay waqti dheeraad ah baaritaanka iyo qiimeynta. Xuquuqda laga yaabo in laguu heli karo marka la eego macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan kaa hayno adiga ayaa hoos ku xusan:
Helitaanka helitaanka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad hesho nuqulka xogta shakhsiga ah ee aan kaa hayno adiga kugu saabsan.
Codso sixitaan / hagaajin xogta shakhsiga ah ee aan kaa hayno adiga kugu saabsan. Tani waxay kuu sahleysaa inaad saxdo wixii xog ah oo aan dhameystirnayn ama aan sax ahayn oo aan kaa hayno. Waxaan codsan karnaa macluumaad dheeraad ah iyo dukumeentiyo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo baahida loo qabo isbeddelka isbeddelka codsiga.
Codso ereyga macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed. Waxaad na weydiisan kartaa inaan tirtirno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, jimicsigaaga xaqiiqda "in la iloobo", halkaasoo aysan jirin sabab wanaagsan oo aan u sii wadi karno. Codsigaan si aad u tirtirto macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waxay keeni doontaa in la xiro xisaabtaada iyo joojinta xiriirka macmiilaha.
Codso inaad 'dhejisid' ama aad xakamayso hawlaha macluumaadkaaga shakhsiyeed xaaladaha qaarkood, sida haddii aad ku tartameyso saxnaanta macluumaadka shakhsi ahaaneed ama sheyga naga nadiifinaya. Kama joojin doonto inaan keydino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed. Waanu kuu sheegi doonaa ka hor inta aynaan go'aansan in aan ku raacsaneyn wax xaddidan codsiyada. Haddii aan macluumaadkaaga shakhsi ahaan u siinno dadka kale, waxaan ku wargalin doonaa xaddidaadda haddii ay macquul tahay. Haddii aad na waydiiso, haddii ay suurtogal tahay iyo sharci ahaan inaa sidaa yeelno, waxaan sidoo kale kuu sheegi doonaa cidda aan wadaagno macluumaadkaaga shakhsiyeed si aad toos ula xiriirto iyaga.
Waxaad xaq u leedahay inaad diiddo xogtaada shakhsi ahaaneed ee lagaga baaraandego ujeedooyinka suuq-geynta tooska ah. Tani waxa kale oo ka mid ah soo saarista sida ugu badan ee la xidhiidha suuq-geynta tooska ah. Haddii aad diiddo inaad ka shaqeyso ujeedooyinka suuq-geynta tooska ah, markaa waxaan joojin doonnaa feylasha macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee ujeedooyinkaas.
Shayga, wakhti kasta, go'aan kasta oo aan qaadan karno oo si hagaagsan ugu salaysan habka automatised (oo ay ku jiraan sheyga). Xirfadlaha waxay ku lug leedahay isticmaalka teknoolajiyada kaa caawineysa inaan si gooni ah go'aanno u gaadhno, oo ku saleysan xogtaada shakhsiyadeed ee aanu kaa soo aruurineyno adiga ama dhinac saddexaad.
Uma baahnid inaad bixiso lacag si aad u hesho macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed (ama inaad jimicsatid xuquuqda kale). Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaanu kugu soo dalacno lacag macquul ah haddii codsigaagu si cad u muuqanayo, ku celcelin ama xad-dhaaf ah. Haddii kale, waxaan diidi karnaa inaan u hoggaanno codsigaaga xaaladahaas.
Waxaan isku daynaa inaan ka jawaabno dhammaan codsiyada sharciga ah hal bil gudaheed. Mararka qaar waxay naga qaadan kartaa muddo ka badan hal bil haddii codsigaagu yahay mid aad u adag ama aad sameysay tiro codsi. Xaaladdan, waxaan kuu soo sheegi doonaa oo aan kugula socon doonaa.
Waxaan ku dadaalnaa inaan hubinno ilaalinta xogta nala soo dirtay, labadaba inta lagu jiro gudbinta iyo marka aan helno. Waxaanu ilaalinaa ilaalinta haboon, ilaalinta farsamooyinka iyo jireed si loo ilaaliyo macluumaadka shakhsiyeed si looga badbaado shilalka aan sharciga ahayn ama aan sharciga aheyn, luminta shilalka, isbeddel aan la oggolayn, soo bandhigid aan la fasaxin ama helitaanka, si xun u isticmaalka, iyo nooc kasta oo kale oo sharci darro ah ee farsamaynta shakhsiga ah ee hanti. Tani waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dusha kuraasta, ilaalinta sirta ah iyo kontaroolida kale ee helitaanka iyo xaqiijinta.
Si kastaba ha ahaatee, habka loo gudbiyo internetka, ama habka kaydinta elektarooniga ah, waa 100% ammaan. Ma xaqiijin karno amniga macluumaadka aad noo soo gudbinaysid oo aad sidaas ku sameysid khatartaada. Sidoo kale ma xaqiijin karno in macluumaadka noocaas ah aan la heli karin, la shaacin, bedeli, ama lagu burburin karo jebinta mid kasta oo ka mid ah shakhsiyadeena, farsamo, ama ilaalinta maamulka. Haddii aad aamminsan tahay in macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee la jabsaday, fadlan nala soo xiriir.
FXCC waxay ku kaydin kartaa macluumaadkaaga macluumaadkaaga si ay u tixraacdo si ay uga jawaabaan su'aalaha ama xalinta dhibaatooyinka, waxay bixiyaan adeegyo kobcaya iyo kuwo cusub iyo inay ka soo baxaan shuruudaha xogta sharciga ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaan sii hayno macluumaadkaaga ka dib markaad joojisid isticmaalka Suuqa ama adeegayaga ama haddii kale nala wadaagno.
Kukiyada ayaa ah qaybo yar oo qoraal ah oo lagu keydiyo kombiyuutarkaaga si aanu nooga caawino nooca barta internetka iyo goobaha aad isticmaalayso, halka aad ku jirtay bogga internetka, markaad ku soo noqoto websaydhka, meesha aad ka timid, iyo inaad hubiso macluumaadkaaga aamin. Ujeedada macluumaadkani waa inay ku siiso waayo-aragnimo aad u habboon oo wax-ku-ool ah oo ku saabsan goobta FXCC, oo ay ku jiraan soo-bandhigidda bogagga shabakadda sida waafaqsan baahiyadaada ama doorbidkaaga.
FXCC ayaa sidoo kale isticmaali karta adeeg bixiye madaxbannaan oo madaxbanaan si ay ula socdaan gaadiidka iyo isticmaalka bogga internetka. Kukiyada waxaa badanaa loo isticmaalaa bogag badan oo internetka ah oo internetka ah waxaadna dooran kartaa haddii iyo sida loo isticmaalo qaderka adoo bedelaya doorbidkaaga iyo xulashooyinkaaga biraawsarkaaga. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad galiso qaybo ka mid ah www.fxcc.com haddii aad doorato inaad aqbasho aqbaaraadka aqbaaraadka ee shabakadaada, gaar ahaan qeybaha internetka. Sidaas daraadeed waxaan kugula talineynaa inaad oggolaato qadarka aqbalaadda si aad uga faa'iideysato dhammaan adeegyada ku jira bogga internetka.
Waxaad xaq u leedahay in aad go'aansato in aad aqbasho ama diiddo cookies adigoo dejinaya ama bedelaya kumbiyuutarradaaga webka si aad u aqbalo ama u diiddo cookies. Haddii aad doorato in aad diido cookies, waxaad weli isticmaali kartaa boggayaga internetka inkastoo aad adeegsanayso qaar ka mid ah farsamooyinka iyo aagagga boggayaga ayaa laga yaabaa in la xaddido. Sida macnaha aad u diidi karto cookies adoo isticmaalaya kumbuyuutarka shabakadda websaydhka, waxay ku kala duwan yihiin browser-ka-browser-ka, waa inaad soo booqataa boggaaga caawinta tarjumaanka wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad sii wado isticmaalka boggan adiga oo aan bedelin goobaha cookie ee shabakada internetka markaa waxaad ogolaanaysaa siyaasaddayada cookie
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan kukiyada iyo sida loo maareynayo adigoo adeegsanaya shabakadaada / qalabkaaga, fadlan booqo www.aboutcookies.org
Haddii aad jeclaan lahayd inaad nala soo xiriirto wixii su'aalo ah ama faallooyin ku saabsan siyaasaddayada asturnaanta, fadlan nala soo xiriir annaga oo nagala soo xiriir cinwaanka e-mailka, cinwaanka boostada, telefoonka iyo fax ama isticmaal adeegga nagala soo xiriiri kara IM ee wakiilka adeegga macaamiisha.